Somaliland: Banaanbax Lagaga Soo Horjeeday Go’aankii Maxkamadda Ciidanka Oo Ka Dhacay Berbera & Sheekh - Wargane News
Home Somali News Somaliland: Banaanbax Lagaga Soo Horjeeday Go’aankii Maxkamadda Ciidanka Oo Ka Dhacay Berbera...
Dadweynaha ku dhaqan degmada Sheekh ee gobolka Saaxil, ayaa shalay sameeyay Bannaanbax si nabadgelyo ah ku dhammaaday oo ay kaga soo horjeedaan Xukuno dil iyo Xabsi Millateri isugu jira oo ay Maxkamadda Ciidammadu ku ridday Axaddii toddobaadkan 19 eedaysne.
Maxkamadda Ciidammada, ayaa 8 Nin oo shan Maqanayaal yihiin dil ku xukuntay, halka 11 qof oo Badhasaab ku-xigeenkii hore ee gobolka Saaxil Xaamud Xuseen ku jiro ay ku xukuntay xukunno Xabsi Millateri ah . Waxaanay dadweynaha muddaharaadayey ku muujiyeen muddaharaadkooda sida ay uga soo horjeedaan Xukunkaas, isla markaana waxay ku dhawaaqayeen inay diidan yihiin in maxkamad millateri la saaro raggaa oo ka soo jeedda deegaankaa.
Dadka Muddaharaadayay, ayaa isugu soo baxay badhtamaha magaalada Sheekh ee xarunta degmadaas oo ka tirsan gobolka Saaxil, kuwaasoo Waddooyinka magaalada dhex-mara oo ay midda ugu muhiimsani isku xidho gobollada Bariga iyo Galbeedka Somaliland, gaar ahaan magaalooyinka Burco iyo Berbera oo marin u ah Galbeedka iyo Bariga dalka, iyagoo Taayirro ku gubay, Qoryo iyo Dhagaxanna ku xidhay jidkaas. Halkaas oo ay Booliska magaaladu ku kala dareeriyeen Dibed-baxayaasha, isla markaana Jidka ku fureen.
Hase-yeeshee, waxay Muddaharaadayaashu mar labaad isugu soo baxeen dhinaca Buurta Sheekh oo ay sidoo kale halkaasna Dhagaxan ku xidheen, Taayirrana ku gubeen, waxaana saacado xannibmay isu-socodkii Baabuurta u kala socday dhinacyada Berbera iyo Burco, waxaana la sheegay in laba Gaadhi oo kuwa halkaas ku xannibmay ka mid ah khasaare ay muddaharaadayaashu gaadhsiiyeen.
Inkasta oo wax khasaare nafeed ah oo ka dhashay muddaharaadkaasi jirin, haddana sida ay Weriyeyaashu ku soo warramayaan Ciidammo badan oo Boolis ah oo kuwa degmada iyo kuwo la sheegay inay Berbera ka tageen isugu jiray, ayey Xukuumaddu halkaas geysay, kuwaasoo nabadgelyada sugay, isla markaana banneeyey Jidadka ay dadka muddaharaadayey xidheen.
Guddoomiyaha gobolka Saaxil Jaamac Yuusuf Axmed, Maayerka Berbera Cabdishakuur Maxamud Xasan (Cidin) iyo Taliyaha qeybta Booliska gobolka Saaxil, ayaa gaadhay degmada Sheekh, kuwaas oo dhamaantood ka hawlgalay joojinta Muddaharaadkaas iyo xannibaadda Jidka ee uu sababay, waxaanay Weriyeyaashu ku soo warramayaan in Bannaan-baxaas oo ku fiday Tuulooyinka hoos-yimaadda degmada Sheekh qaarkood, sida Qoyta, Galoollay iyo kuwo kale, balse gebi ahaan lagu guulaystay in khasaare la’aan lagu hakiyo.
Dr. Maxamed Haybe Nuur oo ka mid ah Aqoonyahannada reer Sheekh oo isagoo Sheekh jooga la hadlay Laanta Afka Soomaalida ee Idaacadda BBC-da, oo wax laga waydiiyay mudaharaadkaa ayaa ku jawaabay oo yidhi; “Dadku waxay ka cadhoodeen xukunkaas, xukunkaasi haddii uu madani ahaan lahaa oo aanu mid millateri ahaadeen dadku aad ugamay cadhoodeen. Dilkii taliyahaa Cid ka raalli ahayd may jirin ee dadku way ka wada xumaayeen, waxa loogu wada ducaynayey in Illaahay soo qabto ciddii dilkaas geysatay. balse dadku waxay aad uga xusuusanayaan Maxkamaddii dowladdii Millateriga ahayd ee Siyaad Barre. Nidaamka loo maray xukunkaas ayuun bay diiddan yihiin dadkani, laakiin dowladdooda ma diiddana, Qoyska aannu walaalaha nahay ee dhibtaasi ku dhacdayna cid ka xun mooyee cid ka raalli ahayd ma jirin. Dadka waxaannu ku qancinnay in dadka Waddada maraya la sii daayo oo aan la dhibaatayn. Ninkii Looyarka ahaa ee loo qabtay wuxuu aad iyo aad u codsaday in Maxkamad rayid ah loo wareejiyo kiiska, immikana waxaa igu maqaalo ah in Ambiil laga qaadanayo.. Dawladda waannu oggolnahay, laakiin dadka wixii kicinaya in laga fiirsado ayaa fiican.”
Geesta kale, Guddoomiyaha gobolka Saaxil Jaamac Yuusuf Axmed, ayaa sheegay inay Sheekh gaadheen isaga iyo Taliyeyaasha qaybaha gobolka ee Ciidammada, isla markaana ay fureen jidadkii la xidhay oo Gaadiidku si caadi ah uga gudbayaan Sheekh, waxaanu sheegay inay Somaliland ka soo gudubtay wakhtigii cidi waddo xidhan jirtay, cid nabadgelyada laga baryayaana aanay jirin.
Waxa uu Guddoomiyaha Saaxil oo BBC-du wax ka weydiisay muddaharaadka Sheekh ka dhacay ee isu-socodka gobollada kala xidhay, waxa uu yidhi; “Dad muddaharaaday bay ahaayeen, subaxnimaddii markii hore waa la kala dareeriyey waddanana waa la furay, haddana dib bay isu abaabuleen oo waddadii u xidheen. Markaa, immika si fiican bay ku dhammaatay, waddaduna waa furantay, gaadiidkuna way ka gooshayaan. Waannu la hadalnay, dadku inaannu la hadalno ayuun bay doonayeen, nabadgelyadana cidna laga baryi maayo oo Maanta xilligii cid laga baryey ma joogno iyo cid waddo xidhan kartaa, immikana waddadu way fiican tahay, waana la isaga gooshayaa, si fiican baanay ku dhammaatay, waanan soo afjarnay, wax dibed bax ahina ma jiro. Aniga iyo Taliyeyaashii Ciidammadu Sheekh baannu joognaa, dadkii dibed-baxayaasha ahaa waannu la hadalnay, waanay kala dareereen, iyaganaa gacantooda ku guraya dhagixii.”
Badhasaabka gobolka Saaxil Jaamac Yuusuf oo la weydiiyey waxa xilligan qasbaya in Dad Shacab ah Maxkamad Millateri la saaro, waxa uu si kooban ugu jawaabay; “Kollay sharci baa yaalla, sharciga iyo waajibaadka ayuun baa la marayaa, ninkii nin dilayna kollay waajibka ayuun baa laga mari. Taa waxa sharci u haysta Guddoomiyeyaasha Maxkamadaha oo aad weydiin kartaa.”
Wasiirka arrimaha gudaha Somaliland Cali Maxamed Warancadde ayaa isaguna dhankiisa ka hadlay banaanbaxyadda iyo mudaharaaddada, Isagoo arrintaa ka hadlaya isla markaana u waramaya Star Tv, wuxuu yidhi; “Markaa, waxaan ugu baaqayaa dadku inaanay ku degdegin muddaharaadka ee wixii ay ka cabanayaan afkooda ku sheegtaan, qoraal ku sheegtaan, Xafiisyada noogu yimaaddaan oo aannu u sheegno ama ka dhaadhicinno wixii ay doonayaan, dadkuna dhawraan nabadgelyadooda, waayo? Waxaynu joognaa Geeska Afrika oo mushaakil badani ka jiro maanta, waa la isku dhex-dhuuman karaa, dad dano kale leh ayaa ka dhex faa’iidaysan kara. Markaa, dadku inaanay jaanis siinnin mushaakil ka weyn kooda ayaan ku waaninayaa oo sidii hore ee ay u dhawri jireen nabadgelyadooda ay u dhawraan.”
Mudaharaadka Magaalada Berbera
Mudaharaadka Magaalada Burco
Mudaharaadka Magaalada Sheekh